Source Code Control (Version Control System) - MYSTERY ZILLION
Software Development လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဟာ ရေးနေတဲ့ Sorce Code များကိုထိမ်းသိမ်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသားတဲ့နေရာမှာ အမြဲပြုလုပ်ရလေ့ရှိတာက မူရင်းရေးပြီးသား Sorce Code များကိုအကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် ပြင်ပြီးစမ်းရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်ရင်း မကောင်း၍သော်လည်းကောင်း မူရင်းကိုပြန်လိုချင်၍သော်လည်းကောင်း တစ်ခါတစ်ရံမှာခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Source Code Control (Version Control System) တွေဟာ အများကြီးအရေးပါလာပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြုပြင်လိုခဲ့ပါက Lock ချတဲ့နည်းနဲ့ ​ဖြေရှင်းလေ့ရှိပါတယ် အချို့သော Operating System များမှာလည်း Shared file တွေကို Lock ချပေးထားနိုင်ပါတယ်။ သရုပ်ပြပုံကိုအောက်မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ Lock ကိုသုံးချင်းအားဖြင့် သာမန်အနေအထားအတိုင်း Shared လုပ်ရင်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နှစ်ယောက်ပြိုင်ရေးတဲ့ ပျောက်ဆုံးတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Lock လုပ်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာနိုင်တာက Lock ပေးနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်တဲ့ System တစ်ခုလိုအပ်လာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တူညီတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် မတူညီတဲ့နေရာတွေကို နှစ်ဦးပြင်ဆင်လိုခဲ့ပါက Lock ဟာခွင့်ပြုပေးလို့မရတဲ့အတွက် အခြားပြင်ဆင်လိုသူတစ်ဦးဟာ စောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Version Control System(VCS) တွေမှာတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အထက်ပါအခက်အခဲတွေကိ ​ဖြေရှင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ​ဖြေရှင်းပုံကိုတော့ Copy-Modify-Merge လို့ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ သာမန် Shared directory တွေအတိုင်း လူအများအနေနဲ့ ကူးယူပြီးတော့ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ VCS အနေနဲ့ မည်သူကမည်သည့် Version ကို ကူးယူသွားတယ်ဆိုတာ မှတ်သားထားလိုက်ပြီး Repository ထဲမှာမူရင်း Version ရှိမှသာပြင်ဆင်ခွင့်ပေးပါတယ် အကယ်၍သာ အခြားလူတစ်ဦးက ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်သွားပါက ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးတော့ပဲ Version ပြောင်းသွားကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Version ကိုထပ်မံဖတ်ရှု့စေပြီး ထပ်မံပြင်ဆင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် Shared directory ရဲ့အခက်အခဲကို ပြေလည်စေပြီး Lock မလိုအပ်ပဲ တစ်ပြိုင်နည်း လူအများပြင်ဆင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Lock မလိုအပ်​ဘူးဆိုပေမယ့် ချို့ယွင်းချက်အနေနဲ့ လိုအပ်နိုင်တဲ့ အ​ခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
VCS တွေမှာအများအားဖြင့် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်များကို အထောက်အကူပြုလေ့ရှိပါတယ်။
(၁) Backup and Restore: သက်ဆိုင်ရာဆော့ဝဲ Soruce Code များကို Backup and Restore လုပ်ပေးနိုင်ရပါမယ် Backup and Restore ဆိုရာမှာ အချိန်အလိုက်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရပါမယ် ဒီအချက်ဟာတော့ shared directory မှာလည်း လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့် ထူးခြားတယ်မဆိုနိုင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် VCS မှာတစ်ခါတည်း ပါလာတဲ့အတွက် Backup and Restore ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
(၂) Synchronization: ပုံမှန်အားဖြင့် Soruce Code များဟာ တစ်နေရာတည်းမှာ ထိမ်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်လိုတယ်ဆိုပါက မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် စက်အတွင်းကို ကူးယူပြီးမှသာပြင်ဆင်လို့ရပါတယ် ပြင်ဆင်ပြီးလျင်တော့ မူရင်းထိမ်းသိမ်းတဲ့နေရာကို ပြန်လည်ပို့ပြီး အပြောင်းအလဲများကို မှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်။ လူအများတစ်ပြိုင်တည်း ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိယူထားတဲ့ Soruce Code များဟာ နောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲကို လိုကောင်းလိုမှာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် VCS များမှာတော့ Synchronization ကိုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ပါလေ့ရှိတာကြောင့် Synchronization ဟာ လူကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။
(၃) Undo: မိမိပြင်ဆင်လိုတဲ့ Soruce Code တွေကိုကူးယူပြင်ဆင်ပြီးမှ မူရင်းအခြေအနေ ပြန်လိုချင်ခဲ့လျင် လိုအပ်တဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို အလွယ်တကူပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် မိမိတိုပြန်လည်ရောက်ရှိချင်တဲ့ Version or Revision အခြေအနေကို ပြန်လည်ကူးပြောင်းလို့ရပါတယ်။
(၄) Track Changes: မိမိတို့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မှတ်ချက်များရေးသား ပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲတဲ့အကြိမ်တိုင်းမှာ မိမိတို့မှတ်သားလိုတဲ့ ပြောင်းလဲချက်များကို ရေးသားထိမ်းသိမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ဆော့ဝဲမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို လိုအပ်လာပါကပြန်လည် စီစစ်ရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
(၅) Track Ownership: လူအများနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြုလုပ်သွားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ပြန်လည်စီစစ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ VCS တွေမှာ Track Changes တွေအပေါ်မှာ ဘယ်သူကဘယ်လို ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်ပြီးတော့ စီစစ်နိုင်အောင် မှတ်သားထားပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာပြဿနာရှိလာရင် မည်သူပြောင်းလဲသွားလို့ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမျိုး ပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။
(၆) Sandboxing: မူရင်း Soruce Code များကို ပြင်ဆင်လိုပါက VCS ထံကနေ မိမိတို့ထံကိုကူးယူပြီးတော့ ပြင်ဆင်စမ်းသပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စမ်းသပ်မှု့တွေ ပြင်ဆင်မှု့တွေပြီးတဲ့ အချိန်မှသာ VCS ထဲကို ပြောင်းလဲမှု့ပြုလုပ်တဲ့အတွက် မူရင်း VCS ကိုထိခိုက်စေမှု့မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ VCS ဟာ File Server မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဆိုလိုပါတယ် မိမိတို့ပြင်ချင်သလောက်ပြင် VCS ထဲကိုပို့ဆိုတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြုပြင်ပြီးမှသာ VCS ထဲကိုပြောင်းလဲရပါတယ် ဒါမှသာ Revision တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်လောက်ကွာခြားတယ်ဆိုတဲ့ Track Changes များဟာအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Branching and merging: အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Sandboxing ဟာကိုယ်ကူးယူထားတဲ့ Source code များကိုစိုက်ကြိုက် စမ်းသပ်မှု့ဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍သာ အဲဒီ့စမ်းသပ်မှု့များမှာလည်း အဆင့်တွေများနိုင်သလို Track Changes တွေကိုလည်း မူရင်း VCS လိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် VCS မှာပဲ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် Branching အဖြစ်ခွဲထုတ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Branch တစ်ခုစမ်းသပ်ပြီးလို့ မူရင်းထဲကို ပြောင်းလဲမှု့တွေကို ပေါင်းထည့်တာကိုတော့ VCS မှာ merging လုပ်တယ်လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
( VCS များမှအခေါ်အဝေါ်များ၊ SVN ဖြင့်သရုပ်ပြ၍ ပုံနှင့်ပြထားခြင်းများ ဆက်ရန် )
အောက်ဖော်ပြပါ References များမှဖတ်ပြီး အဆင်ပြေသလို ရေးထားခြင်းဖြစ်သည် မူရင်းနှင့်လွဲနိုင်ပါသည် စိတ်ဝင်စားလျှင်သွားဖတ်ပါ စာရင်းများအောက်တွင်ပြထားသည်။
ပထမဦးစွာ ပြောလိုတာကတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို. ဒီ post အတွက်။ ကျွန်တော်တို.ကတော့ SVN အစား Git ကို အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို.နှစ်ခု ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး ။ SVN ကိုသုံးမှ မသုံးဘူးတာကိုး ဗျ ဟဲ... ဟဲ။
ကျွန်တော် ပရိုဂရမ်မာပေါက်စ ကပေါ့။ ကုမ္ပဏီမှာက လူသုံးယောက်တည်းနဲ. ။ ကနဦးအစက မင်းရေးတဲ့ဖိုင် ငါ့ဆီပို. ငါရေးတဲ့ ဖိုင်မင်းယူ ။ ဖိုင်တွေများလာရင် စတစ်နဲ.ကူး ။ အဲ့လိုလုပ်တာ .... အခုနေများအဲ့လိုပြန်လုပ်ဆို သေရချည်ရဲ.။ တစ်နေ.တစ်နေ. အဲ့လို ကူးနေရတာ အလုပ်ကလည်းရှုပ် အချိန်လည်းကုန်တာပေါ့နော်။
စဉ်းစားကြည်.တယ်။ ပရောဂျက်တစ်ခုကို အခု လူသုံးယောက်လုပ်တာ ဒီလိုတွေသာလုပ်ကြရမယ်ဆိုရင် ပရောဂျက်တစ်ခုကို လူအယောက်တစ်ရာလောက်သာလုပ်မယ်ဆိုရင် ?? အဲ့တာနဲ. ကျွန်တော်တို. ဘာသွားတွေ.လဲ ဆိုတော့ အစ်ကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့ Version Control System (VCS) ဖြစ်တဲ့ Git ကိုသွားတွေ.တယ်။ စောစောက ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အလုပ်ရှုပ်တာတွေ သူနဲ.ကျမှပဲ အဆင်ပြေတော့တယ်။
နောက်ပြီး ကြီးကြီးမားမား changes တွေလုပ်တော့မယ့် အရာမျိုးတွေဆိုရင် branch တွေခွဲပြီးလုပ်ကြတယ်။ ပရောဂျက်တစ်ခုတည်းမှာတောင်မှ branch အလိုက်လူတွေခွဲပြီး လုပ်ကြတယ်။ Deploy လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ ၊ ကိုယ်တင်ချင်ရာ branch ကို switch လုပ်ပြီး တင်လိုက်ရုံပဲ ။ ဖိုင်တွေ တစ်ခုခု ပျက်ခဲ့ရင် ၊ မှားဖျက်မိခဲ့ရင်လည်း repository ကနေပြန်ယူယုံပဲ။ အခုဆိုရင် ဂျပန်က လူတွေနဲ. မြန်မာပြည်ကလူတွေ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပရောဂျက်တစ်ခုတည်းအောက် ၊ branch တစ်ခုတည်းအောက် ၊ file တစ်ခုတည်းအောက်မှာကိုပဲ အဆင်ပြေပြေ develop လုပ်နိုင်ကြပါတယ် ခင်ဗျား။
ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျနော် က SVN သံုးပါတယ် Git ကိုတော့ လေ့လာဆဲပါ။
တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျ Git ကို Local Server မှာသံုးလို့ရလားဆိုတာပါ။
Git က Server ရှိရှိမရှိရှိ သုံးလို့ရပါတယ် Local Server လိုချင်ရင်တော့ Gitolite လို Simple Server သုံးချင်လည်းရတယ် ဒါမှမဟုတ် Administration ကို သိပ်မလုပ်တတ်ဘူး UI လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Gitlab လိုကို Install လုပ်ထားရင် Local မှာလည်း Server Setup လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
Thanked by2Niki Void_Main